Minisitra Andriantsitohaina Naina: « Azon’ny Amerikanina ampiasana vola aty Madagasikara » | NewsMada
Minisitra Andriantsitohaina Naina: « Azon’ny Amerikanina ampiasana vola aty Madagasikara »
Nanome toky ny minisitra, Andriantsitohaina Naina, fa hatao laharam-pahamehana ny fanafoanana hatrany ifotony ny kolikoly. Anisan’ny tanjona ny fahafahana mandraharaha am-pilaminana sy am-pahatokisana eto Madagasikara.
Nandray anjara fitenenana nandritra ny fihaonamben’i Etazonia sy i Afrika tany Addis Abeba, ny talata lasa teo, ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy, Andriantsitohaina Naina. Nomeny toky ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara, indrindra ireo mpandraharaha nanatrika ny fotoana, fa hohatsarain’ny filoha Rajoelina ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola eto amintsika. Singanina amin’izany ny fampiasam-bola vahiny mivantana (IDE) ka ho voakasik’izany koa ny orinasa na ny mpandraharaha amerikanina”. Notsipihiny manokana ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE), mifototra amin’ny vinan’ny filoham-pirenena, ka laharam-pahamehana voalohany ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ao anatin’ny fanjakana tan-dalàna. Vonona ny governemanta hanafoana hatramin’ny fakany ny kolikoly, manimba ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara.
Hanajary 100 000 ha
Nampahafantarin’ny minisitra Andriantsitohaina ny mpanatrika koa fa anisan’ny fandaharanasan’ny governemanta ny fampiasana ny indostria amin’ny lafiny fambolena, ahatongavana amin’ny fahavitan-tena amin’ny sakafo. Hampitomboana ny velaran-tany hajarina, miampy ny fananganana tanàna vaovao. Eo koa ny fanarenana sy ny fanamboaran-dalana vaovao.
Mikasika ny lafiny vary, nambarany fa efa hita ny toerana vaovao mirefy 100 000 ha hatao tanimbary. Misy fepetra manokana raisina, hisarihana ny mpandraharaha vahiny, hampiasa vola amin’izany, hanatrarana ny tanjona hamokatra vary 500 000 ha fanampiny, ankoatra ny 300 000 t vokarina eto Madagasikara.
Nentanina hanamarina ifotony
Marihina fa tombontsoa azo ao anatin’ny tsenam-paritra ny fahalalahan’ny fifanakalozam-barotra, tsy tataovana haba (ZLE). Nohazavain’ny minisitra, nandritra ny lahateniny, fa samy mahazo tombontsoa ny Malagasy sy ny mpampiasa vola vahiny amin’ny fambolena sy ny indostria satria midadasika i Madagasikara. Koa satria, fihaonamben’i Etazonia sy i Afrika ity fotoana ity, nentanin’ny minisitra malagasy ireo mpandraharaha amerikanina, hijery ifotony aty Madagasikara, sy hanamarina izay nohazavainy. Ho hitan’izy ireo amin’izany ny tena fanovana sy ny fanarenana eto amin’ny firenena.